Mobile game နဲ့ ချစ်​သူ – Tameelay
“ကိုကို ကျွဲပါးစောင်းတီး ဆိုတာ ဘာပြောတာလဲ”
ဟန့် Mobile Legends ဆော့ နေပါတယ်ဆို ဘာတွေ လာမေး နေလဲ မသိဘူး
“ကျွဲရဲ့ ပါးကို စောင်းလုပ်ပြီး တီးတာလေ”
“အော.. အော်.. အဲ့တာကြောင့် နေမှာနော် ကျွဲပါးတွေက အကြီးကြီး”
ငင့် ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူး
“ကိုကို ဖလက်ဖောင်း ခေါင်းအုံးဆိုတာ ဘာပြောတာလဲ”
“ပလက်က ဖောင်းရဲ့ ခေါင်းအုံးကို ယူပြီး အုံးတာလေ”
“အော် အာ့ဆို ပလက်မှာက ခေါင်းအုံး မရှိဘူး ပေါ့နော်”
“ကိုကို ဟို မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ် ဆိုတာ ဘာလဲ”
ဟာ..​စောင်​စကား များချက် ဒီမှာ မသေအောင် မနည်းဆော့ နေရပါတယ် ဆို
“လက်မောင်းအား မရှိလို့ မျက်နှာအား ယူပြီး ခဲ ပစ်လိုက်တာကို ပြောတာ”
“အော် အဲ့တာဆို မျက်နှာက လက်မောင်းထက် အား များတာပေါ့ နော်”
ဂေါက်သီးမ ဘာတွေ လာမေးနေမှန်း မသိဘူး ဂိမ်းဆော့ရတာ ဖီးလ်အငုတ် မခံနိုင်လို့ ဖြေချင်ရာ ဖြေပေး နေရတာ
“လှတာ မက်ရင် ညစာ ခက်တယ် ဆိုတာ ဘာလဲဟင်”
“မလှ အိမ်မှာ ညစာချက်ဖို့ ဆန် မရှိတာကို ပြောတာ”
“အော်… မလှလေး သနား ပါတယ်နော်”
မသာမ တော်တော် ကြာကြာ ငြိမ်သွားတယ်လေ စကားပုံတွေ စဉ်းစားနေတာမှာ ကျနော် ဂိမ်းကို အေးဆေး ဆော့ နေရတာပေါ့ ကျနော့် ဂိမ်းကလဲ ရှုံးခါ နီးနေပြီ မနည်း ရုန်းကန် နေရတဲ့ အနေ အထားလေ
“မိဘကျေးဇူး မြင့်မိုလ်ဦး ဆိုတာ ဘာလဲဟင်”
ကျစ် ဒီမှာ battle ဖြစ်နေပါတယ် ဆိုမှ ထပ် လာ မေးတယ်လေ
“ကိုကို မေးနေတယ် လေ”
“အဲ့တာ သဲရဲ့ မိဘ…. ဟာ….. ဟာ…. သေပြီ တောက်စ်..”
“အန်… ဟို.. ဟို… ဂိမ်းထဲ..”
“မရှင်းပြနဲ့ ရှင်က ကျမ မိဘကို သေစေ ချင်နေတာ မလား”
“မဟုတ်ဘူး ဂိမ်းထဲက ပြောတာလို့”
“မသိဘူး ရှင့်ကို ကျမ စိတ်ကုန်သွားပြီ ယူတောင် မယူ ရသေးဘူး ရှင်က ကျမ မိဘကို ဆုတောင်းနေပြီ ရှင်နဲ့ ဘယ်တော့မှ မပတ်သက် တော့ဘူး”
ငတိမ ပြောချင်တာ ပြောပြီး ဆတ်ကော့ လက်ကော့နဲ့ ထွက် သွားတယ်လေ
ငုံးပဲ Mobile Lengends အကျိုး ပေးပုံက ရည်းစားနဲ့ ပျက်တဲ့ အထိပဲ
အချိန်ရတုန်း နောက်တစ်ပွဲ ဆက်ဆွဲ လိုက်အုံးမယ်
Legend ရောက်မှ နားမယ်
“ကိုကို ကြှဲပါးစောငျးတီး ဆိုတာ ဘာပွောတာလဲ”
ဟနျ့ Mobile Legends ဆော့ နပေါတယျဆို ဘာတှေ လာမေး နလေဲ မသိဘူး
“ကြှဲရဲ့ ပါးကို စောငျးလုပျပွီး တီးတာလေ”
“အော.. အျော.. အဲ့တာကွောငျ့ နမှောနျော ကြှဲပါးတှကေ အကွီးကွီး”
ငငျ့ ဘာမှလဲ မဆိုငျဘူး
“ကိုကို ဖလကျဖောငျး ခေါငျးအုံးဆိုတာ ဘာပွောတာလဲ”
“ပလကျက ဖောငျးရဲ့ ခေါငျးအုံးကို ယူပွီး အုံးတာလေ”
“အျော အာ့ဆို ပလကျမှာက ခေါငျးအုံး မရှိဘူး ပေါ့နျော”
“ကိုကို ဟို မကျြနှာလှဲ ခဲပဈ ဆိုတာ ဘာလဲ”
ဟာ..​စောငျ​စကား မြားခကျြ ဒီမှာ မသအေောငျ မနညျးဆော့ နရေပါတယျ ဆို
“လကျမောငျးအား မရှိလို့ မကျြနှာအား ယူပွီး ခဲ ပဈလိုကျတာကို ပွောတာ”
“အျော အဲ့တာဆို မကျြနှာက လကျမောငျးထကျ အား မြားတာပေါ့ နျော”
ဂေါကျသီးမ ဘာတှေ လာမေးနမှေနျး မသိဘူး ဂိမျးဆော့ရတာ ဖီးလျအငုတျ မခံနိုငျလို့ ဖွခေငျြရာ ဖွပေေး နရေတာ
“လှတာ မကျရငျ ညစာ ခကျတယျ ဆိုတာ ဘာလဲဟငျ”
“မလှ အိမျမှာ ညစာခကျြဖို့ ဆနျ မရှိတာကို ပွောတာ”
“အျော… မလှလေး သနား ပါတယျနျော”
မသာမ တျောတျော ကွာကွာ ငွိမျသှားတယျလေ စကားပုံတှေ စဉျးစားနတောမှာ ကနြျော ဂိမျးကို အေးဆေး ဆော့ နရေတာပေါ့ ကနြေျာ့ ဂိမျးကလဲ ရှုံးခါ နီးနပွေီ မနညျး ရုနျးကနျ နရေတဲ့ အနေ အထားလေ
“မိဘကြေးဇူး မွငျ့မိုလျဦး ဆိုတာ ဘာလဲဟငျ”
ကဈြ ဒီမှာ battle ဖွဈနပေါတယျ ဆိုမှ ထပျ လာ မေးတယျလေ
“ကိုကို မေးနတေယျ လေ”
“အဲ့တာ သဲရဲ့ မိဘ…. ဟာ….. ဟာ…. သပွေီ တောကျဈ..”
“အနျ… ဟို.. ဟို… ဂိမျးထဲ..”
“မရှငျးပွနဲ့ ရှငျက ကမြ မိဘကို သစေေ ခငျြနတော မလား”
“မဟုတျဘူး ဂိမျးထဲက ပွောတာလို့”
“မသိဘူး ရှငျ့ကို ကမြ စိတျကုနျသှားပွီ ယူတောငျ မယူ ရသေးဘူး ရှငျက ကမြ မိဘကို ဆုတောငျးနပွေီ ရှငျနဲ့ ဘယျတော့မှ မပတျသကျ တော့ဘူး”
ငတိမ ပွောခငျြတာ ပွောပွီး ဆတျကော့ လကျကော့နဲ့ ထှကျ သှားတယျလေ
ငုံးပဲ Mobile Lengends အကြိုး ပေးပုံက ရညျးစားနဲ့ ပကျြတဲ့ အထိပဲ
အခြိနျရတုနျး နောကျတဈပှဲ ဆကျဆှဲ လိုကျအုံးမယျ
Legend ရောကျမှ နားမယျ
မျက်တောင်မွေးလေး . . . ရှည်စေချင်
မိန်းကလေးတိုင်းက ကော့ညွတ်ထူထဲနေတဲ့ မျက်တောင်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။ ရှည်လျားကော့ညွတ်တဲ့ မျက်တောင်လေးတွေက မျက်ဝန်းအလှကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေလို့ပါ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ မျက်တောင်လေးတွေ လှပဖို့ မျက်တောင်ကော့ဆေး၊ မျက်တောင်အတုတွေ ပေါ်လာပါပြီ။ ဒါတင် မကသေးပါဘူး၊ ပုံသေမျက်တောင်ဆက်တာပါ ရှိလာပါပြီ။ ♥ မိန်းကလေးအတော်များများက လှဖို့ဆိုရင် အကုန်စမ်းကြည့်ချင်ကြတာများပါတယ်။ မျက်တောင်ဆက်ဖို့ စဉ်းစားထားရင် မျက်တောင်ဆက်တာနဲ့ …
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ အချစ်ဆုံး “ကိုယ့်ထက် မင်းကိုပိုချစ်တယ်”ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေမှာ သိပ်ပြီးအဟုတ်ကြီး ထင်မနေနဲ့။ သိပ်ပြီးခံစားမနေနဲ့။ လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါက ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်တယ်ပြောပြော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ အချစ်ဆုံးပဲ။ မင်းကိုပိုချစ်တယ်ဆိုတာလည်း သူ့အတွက်ပါပဲ။ သူ့အတွက်ကိုယ့်ကို ချစ်တာပဲလေ။ သူ့ခံစားချက်အတွက် ကိုယ့်ကိုချစ်တာပဲ မဟုတ်လား။ မြတ်ဗုဒ္ဓက “အတ္တ သမာ …